ပက်ထရိုကလပ်စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပုံပေမြို့ဟောင်းတွင် တွေ့ရသော ပက်ထရိုကလပ်စ်ရုပ်ပုံ နံရံဆေးရေးပန်းချီ
ပက်ထရိုကလပ်စ်(ရှေးဟောင်းဂရိ: Πάτροκλος Pátroklos "ဖခင်၏ ဂုဏ်ကျက်သရေ")သည် ဟိုးမားမှတ်တမ်းတင်ရေးသားခဲ့သော အိလိယဒ် ဂရိဒဏ္ဍာရီအရ အာခိလိစ်၏ ငယ်သူငယ်ချင်းနှင့် အိုးစားဖက်ဖြစ်ပြီး (နှောင်းပိုင်း စာရေးဆရာများက) ချစ်သူများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
Jacques-Louis David ရေးဆွဲခဲ့သော ပက်ထရိုကလပ်စ် (၁၇၈၀)
ပက်ထရိုကလပ်စ်သည် မီနိုးတီးယပ်စ်၏ သားတော်ဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအမျိုးသမီးများမှာ ဖီလိုမီလာ၊ ပိုလီမီလယ်နှင့် Sthenele Periopis,နှင့် Damocrateia  တို့ဖြစ်သည်။ His only sibling was Myrto, mother of Eucleia by Heracles. Homer also references Menoetius as the individual who gave Patroclus to Peleus. Menoetius was the son of Actor, king of Opus in Locris by Aegina, daughter of Asopus.
↑ Eustathius of Thessalonica on Homer, p. 1498; Scholia on Homer, Odyssey 4.343 and 17.134; Hyginus, Fabulae 97
↑ Tzetzes၊ John (2015)။ Allegories of the Iliad။ ဘာသာပြန်သူ Goldwyn၊ Adam; Kokkini၊ Dimitra။ Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England: Dumbarton Oaks Medieval Library။ pp. 33, Prologue 430, pp. 41, Prologue 525။ ISBN 978-0-674-96785-4။
↑ Scholia on Homer, Iliad 16.14; on Apollonius Rhodius, Argonautica 1.46;
↑ Apollodorus of Athens, Bibliotheca (Pseudo-Apollodorus) 3.13.8 mentions the three possible mothers of Patroclus: (1) Polymele, daughter of Peleus (according to Philocrates), (2) Sthenele, daughter of Acastus and lastly (3) Periopis, daughter of Pheres (mythology)
↑ Pythaenetos, quoting the Scholia on Pindar, Olympian Odes 9.107
↑ Plutarch, Aristides 20.6
↑ ၇.၀ ၇.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Iliad1924
↑ Homer။ "online text"။ Iliad။ Perseus Digital Library။ 23.85။ 
↑ Homer။ "online text"။ Iliad။ Perseus Digital Library။ 11.785။ , and online။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပက်ထရိုကလပ်စ်&oldid=725045" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။